Lifestyle | Yangon Thu Michelle - Part 2
လမ်းမတော်တန် ဆောင်တိုင်ပွဲ စျေးရောက်ပြီးပြီလား
လမ်းမတော်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲစျေး ရောက်ပြီးပြီလား ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေ …. ပျော်ရွင်စရာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော် … ချစ်တဲ့ ရန်ကုန်သူမီရှဲ #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်
ဘန်ကောက်က စျေးတန်တဲ့ တည်းခိုစရာ
ဘန်ကောက်မှာ ဘယ်လိုချွေတာလဲ ပြောပြခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ တည်းခဲ့တဲ့ hostel ကို ရွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြမယ်။ ရွေးခဲ့တာကတော့ ရက်ကြာကြာနေနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာတည်းနေလို့လို့ပဲပြောရမယ်။ ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက ဘန်ကောက်ကနေ အွန်လိုင်းရှော့ပင်လုပ်ရင်း ချွေတာရေးအနေနဲ့ အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်က hostel မှန်သမျှလိုက်တည်းပြီး အဆင်ပြေဆုံးကိုရွေးနေနေတာ။ Hostel…
တူရကီကနေ ပြန်ရောက်ပြီမို့ အရင်လို အကြောင်းအရာတွေ Tips တွေ ဗီဒီယိုတွေ ကြောင်း
တူရကီကနေ ပြန်ရောက်ပြီမို့ အရင်လို အကြောင်းအရာတွေ Tips တွေ ဗီဒီယိုတွေပြန်ရေးတော့မှာမို့ Page ကိုစောင့်ကြည့်အားပေးပါဦးနော် … ချစ်တဲ့ အမြဲတမ်းရန်ကုန်သူ #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #turkey #sirince @ Selçuk Şirince
ရန်ကုန်သူမီရှဲ လိုက်မေးမြန်းဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်
ရန်ကုန်သူမီရှဲ လိုက်မေးမြန်းဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အနာဂတ်မှာ သင်ယူလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတွေ ပိုရလာမယ်လို့ ထင်လား? (Unicode) အနာဂတ်မှာ သင်ယူလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတွေ ပိုရလာမယ်လို့ ထင်လား?ဒီဗွီဒီယိုမှာ Yangon Thu Michelle – ရန္ကုန္သူမီ႐ွဲ က မြန်မာလူငယ်တချို့ ကို လိုက်လံမေးမြန်းထားပါတယ်။ ကြည့်ရှုပြီး သင့်အမြင်ကိုလဲ…
စွန့်စားမယ် အချစ်ရေ လိုက်ရဲလား
စွန့်စားမယ် အချစ်ရေ လိုက်ရဲလား #yangonthumichelle #michellemayshell #lifestyleblogger #cappadocia #balloonview
မီရှဲက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခဏခဏကုန်တယ်
မီရှဲက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခဏခဏကုန်တယ်လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ခေါင်းလျှော်ရည် သွားဝယ်တော့ သုံးနေကြ Dove က ကံစမ်းမဲပါတဲ့စတေကာနဲ့ ဘူးလေးတွေတွေ့လို့ဝယ်လာသေးတယ်။ ဘူးပေါ်မှာတော့ သြဂုတ်လကုန်ထိပဲလို့ရေးထားလို့ လန့်သွားတာ. Dove Facebook Page မှာဝင်မေးကြည့်မှ အောက်တိုဘာလကုန်ထိ ရသေးတယ်ဆိုတာ သိရမှ…
မီရှဲနဲ့ မွေးလမှာ အမှတ်တရ Yangon Heritage Trust နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လျှောက်သွားခြင်း
မီရှဲနဲ့ မွေးလမှာ အမှတ်တရတစ်ခုခုဖြစ်ချင်တာကြောင့် Yangon Heritage Trust နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို လမ်းလျှောက်လေ့လာတဲ့ ခရီးစဉ်လေးတစ်ခု စီစဉ်ဖြစ်တယ်။ #မီရှဲနဲ့လျှောက်သွားမယ် #walkwithmichelle လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီခရီးက အချိန် ၂နာရီခွဲလောက်ကြာအောင် လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းအောက်ဘလောက် YHT ရုံးကနေ ၂၂လမ်း အနော်ရထာဘလောက်က…
Cinderella Foto Facial Treatment
Cinderella Foto Facial Treatment (Giveaway Included)ရန္ကုန္သူမီရွဲတစ္ေယာက္ ညဘက္ေတြဆို မအိပ္၊ ျပီးရင္ ရိုက္ကူးေရးရွိတဲ႔ရက္ဆို လူးလဲထ၊ မိတ္ကပ္လိမ္းျပီး ကမူးရွဴးထိုးနဲ႔ သြားရတာ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာျပီ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္က ဘာလုပ္လုပ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေနေပမယ့္ ၂၃ႏွစ္ေက်ာ္လာတာနဲ႔ အသားအေရက ဇာတိျပလာတယ္။ အဆီဖုေတြထြက္တယ္။ ဝက္ျခံေတြေပါက္တယ္။ ျပီးရင္…
Michelle is one of the few lifestyle Vloggers in Myanmar. She has unique taste in seeing things around her. Tone is young, fresh and narration is personal and also engaging.
She picks topics on how she view common things in different perceptive. Topics are mostly exploring places with histories and stories, how-to beauty and fashion, shopping advice, relationship, travel. randon. challenges, self defense adn women empowerment.
3 minute myanmar
CHEAP HOSTEL IN BANKOK
BRITISH COUNCIL YANGON
MONEY SAVING TIPS IN BANGKOK
Copyright © 2019 Yangon Thu Michelle. All Rights Reserved. Design & Developed by Header Media & Advertising Agency.